Nchịkọta nke ihe ndị na-enyocha mbara igwe n'afọ 2018 | Network Meteorology
Nchịkọta nke ihe ndị na-enyocha mbara igwe n'afọ 2018
Afọ 2018 amalitela otu izu na ụbọchị abụọ gara aga dị iche iche na mbara igwe ihe na ị gaghị echefu ya. Site na kpakpando dara site na chi jiri.
Chọrọ ịma ihe omume ndị na-echere anyị n'afọ niile?
1 Ihe ndị metụtara ọnwa
2 Ihe ndị metụtara anyanwụ
3 Mmemme Starfall
3.1 Na-esighi ike ọdịda starfall
3.2 Ike Kpakpando Na-ada
Ihe ndị metụtara ọnwa
Ebe kacha dị nso na Ọnwa ka Earthwa a na-akpọ ya perigee. Januarybọchị abụọ gara aga nke ọnwa a, ọnwa dị na Perigee. N’iburu n’ọnwa n’ọnwa ugbu a, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọnwa ọzọ n’ọnwa na Jenụwarị 2. A na-akpọ ihe omume a nke anaghị eme ọtụtụ oge Ọnwa Blue, ọ bụ ezie na a naghị ahụ agba ahụ. Na mgbakwunye, ngụkọta ọnwa ga-ewere ọnwa, mana a gaghị ahụ ya na Spain. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ ihe ịtụnanya a, ị ga-aga North America na Australia.
Ndị ọzọ ngụkọta ọnwa jiri ọnwa pụrụ ịnụ ụtọ na July 27 ma ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị karịa nke gara aga, ebe ọ bụ na a pụrụ ịhụ Ọnwa na ụda ọbara ọbara. A ga-ahụ chi jiri n'ehihie a na Spen na mpaghara kachasị mma ga-adị na Balearic Islands, na-enwekarị elekarị n'ehihie na 22:21 (oge peninsular).
Ihe ndị metụtara anyanwụ
Na Jenụwarị 3, e debere ụwa na ebe kacha nso maka Sun, na-etinye naanị kilomita 147 dị anya.
Na Febụwarị 15, a ga-enwe chi jiri n'ehihie n'agbanyeghị na a gaghị ahụ ya na Spen. A ga-ahụ ya naanị na Antarctica na South America.
Na Julaị 6, ụwa ga-adị n’ebe kacha dị anya site na Sun 152 nde kilomita.
A na-ahazi ọnwa n'ehihie ọzọ na July 13, mana ọ gaghị ahụ na Spain, naanị na Antarctica na ndịda Australia.
Ka ọ dị na Ọgọstụ 11, a ga-enwe chi jiri n'ehihie site na Greenland na oke ugwu nke Canada, Europe na ebe ugwu Eshia.
A na-ahụ ihe dị iche iche ịsa ahụ meteor na abụọ: nke kachasị ike na nke siri ike. Ka anyị buru ụzọ lee anya na mkpokọta nke adịghị ike agbapụ kpakpando ihe na ụbọchị ha ga-ewere ọnọdụ.
Na-esighi ike ọdịda starfall
taurids na leonids
N’ọnwa Febụwarị anyị ga-enwe mmemme ịsa ahụ pere mpe abụọ a maara dịka alpha-centáurides na delta-leonids. Nke mbụ ga-eme na February 8 na nke abụọ na 24.
Na March anyị nwere ike ịnụ ụtọ obere mmiri ozuzo abụọ ọzọ akpọrọ Gamma-Normids na Virginids. Ha ga-ewere ọnọdụ na 13th na 25th, n'otu n'otu.
N'April, anyị ga-enwe ike ịhụ na mbara igwe ihu igwe amachaghị nke a na-akpọ abụ na pi-puffy, na-eme na Eprel 22 na 24.
Na May 20 ị nwere ike ịhụ Sagittarids. Ndị a bụ meteors na-adịghị ike.
Na June 27 ka a ga-eme kpakpando ndị a na-agbapụ na-akpọ akpụkpọ ụkwụ, ịbụ onye a na-amachaghị.
July ga-abụ otu ọnwa ebe ọtụtụ ihe nkiri kpakpando ga-eme, ọ bụ ezie na ọ baghị uru dị ka ndị Perseids na August. Anyị na-amalite ọnwa ahụ Pegasid Na July 10, anyị ga-aga n'ihu na Phoenicides na July 13, anyị ga-aga n'ihu na Osimiri Austrinid na Southern Delta-Aquarids na July 28 na, iji kwụsị ọnwa ahụ, mkpụrụedemede alpha-capricorns na 30th.
N'ọnwa Ọgọstụ, anyị ga-enwekwa ihe ndị ọzọ na-esighi ike meteor a maara dị ka n'ebe ndịda iota-aquarids (August 4th), ugwu Delta-aquarids (August 8th), ndị kappa-cynids (August 18) na ugwu iota-aquarids (20th nke August).
Na Septemba anyị ga-enwe ọtụtụ mmiri ozuzo nke adịghị ike na-ada ada na-agbasa n'ime ọnwa. Na Septemba 1 anyị ga-enwe alpha-aurigid, 9 Delta-aurigid na piscid 20.
Ọktọba nwekwara ụfọdụ mmiri meteor na-esighi ike a maara ndị draconids (October 8), lace epsilon-geminids (Ọktọba 18) na orionids (Ọktọba 21).
Nọvemba ọ nwere ọnwa anọ na-esighi ike Meteor Show na-agbasa na ọnwa. A maara ha dị ka south taurids, north taurids, leonids na alpha-monocerotids. Ha ga-eme ụbọchị 5, 12, 17 na 21, n'otu n'otu.
Imechi afọ na ọnwa Disemba, chi-orionids (December 2), Phoenicides (December 6), ụmụ nkịta / vélidas (December 7), monocerotids (Disemba 9), sigma-hydrids (December 12), eri ha aubergines (Disemba 20) na ursids (Disemba 22th). Mmiri a nwere ike ọ gaghị ahụ nke ọma, ebe ọ bụ na igwe ojii na-arịwanye elu karị na Disemba.
Ike Kpakpando Na-ada
Atọ Meteor Shower a ma ama ga-eme n’afọ niile. Ihe omume ndị a nwere ike ịbụ nke a na-ekwusi ike ma mara ọtụtụ ndị na-agụ kpakpando (na ndị na-abụghị). Ihe omume ndị a bụ:
Na eta aquarids. A maara ha na ha na Halley's Comet a ma ama. Ọ bụ meteor ịsa ahụ nwere ọrụ nke 60 meteors kwa awa ma nwee ike ile ya anya na Mee 6.
N’ọnwa Ọgọst ọ ga-ewere ọnọdụ ndị ama ama ama San Lorenzo. Ha bụ mmiri ozuzo nke ruru 100 meteors kwa elekere ma ha ga-enwe oke na August 13.
Na Disemba, igwe mmiri kacha egwu nke afọ ga-aputa, ndị Geminids. Oke kachasị ga - eme na Disemba 14 ma ọrụ ahụ ga - abata ruru 120 meteors kwa awa.
Site na ozi a, ịnweghị ihe ngọpụ ịhapụ uche ihe omume mbara igwe niile nke ga-eme n'ime afọ a. Nwee obi ụtọ na ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Nchịkọta nke ihe ndị na-enyocha mbara igwe n'afọ 2018
Mgbanwe ihu igwe na-etinye nduru na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Australia n'ihe egwu
Snow na Sahara maka oge mbụ n'ime afọ 39